नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा डा. गंगाप्रसाद उप्रेती पुनः नियुक्त « News24 : Premium News Channel
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा डा. गंगाप्रसाद उप्रेती पुनः नियुक्त
काठमाडाै‌‌ । सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई पुनः नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक केपी शर्मा ओलीले आगामी चार बर्षका लागि पुनः उप्रेतीलाई कुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलपति उप्रेतीलाई आजै पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनु भएको छ । सपथ समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानले समाजलाई साहित्य र साँस्कृतिक हिसाबले उजिल्याउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उप्रेती अघिल्लो कार्यकालमा कुलपति थिए र त्यसअघिको कार्यकालमा उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिष्ठानको रिक्त सदस्य सचिवमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जगतप्रसाद उपाध्याय नियुक्त गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा दुबैको नियुक्ति भएको हो । अन्य प्राज्ञ परिषद् सदस्यको नियुक्तिको पनि तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भदौ १९ गते पदाधिकारी रिक्त थिए ।